माओवादीलाई किन पर्यो पहिचानको संकट ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
माओवादीलाई किन पर्यो पहिचानको संकट ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी पार्टीमा पहिचानको संकट आउन थालेको भन्दै गहिरो चिन्ता प्रकट गरे । उनी त्यतिमै रोकिएनन्,उनले माओवादी र संसदवादी दलबीचको अन्तर मेटिँदै गएको समेत बताए ।
सामाजिक क्रान्तिका लागि जस्तोसुकै वलिदानी भन्थ्यौं र गर्थ्याै‌ र माओवादी जनताले सजिलै चिन्थे । माओवादी अर्कै हुन् र अरु पार्टी अर्कै हुन् । तर, अब त्यस्तो रहेन ।’
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिन बुधबार काठमाडौंको कुमारी सिनेमा हलमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले माओवादी हिजोको जस्तो क्रान्तिकारी र जनताको सेवक पनि नभएको भान जनतालाई पर्दै गएको उल्लेख गरे । जनतालाई माओवादी जनप्रतिनिधि अझ बढी खराब छन् भन्ने लागेको पनि आफूले बुझेको बताउन पनि प्रचण्ड चुकेनन् ।
‘हामी उन्नत विचारको पक्षपोषण गर्छौं । समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्छौं । उन्नत र सुसंस्कृत मानिसको कुरा गर्छौं । तर, हिजो हामी जनयुद्धमा थियौं । क्रान्तिकारी जनआन्दोनलमा थियौं । त्याग र वलिदानको कीर्तिमान गथ्र्यौं । हामी क्रान्तिकारी रुपान्तरणका अभियन्ता थियौं । सामाजिक क्रान्तिका लागि जस्तोसुकै वलिदानी भन्थ्यौं र गर्थ्याै‌ माओवादी जनताले सजिलै चिन्थे । माओवादी अर्कै हुन् र अरु पार्टी अर्कै हुन् । तर, अब त्यस्तो रहेन ।’
उनले पहिले माओवादीले जनतासँगै रहेर खेतिपातीको काम गर्ने, जनता बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने र शिक्षाको कुरामा पनि जनताको सेवा गर्ने पार्टी हुनुपर्ने बताए ।
संसद उपयोगको थलोमात्र ?
प्रचण्डले आफूहरुलाई संसदवादी नभन्ने र नमान्ने तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरे पनि संसदवादलाई स्वीकार नगरेको उनले बताए । पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन यो ‘स्टेप’ बाट जानुपर्ने भएकाले यतातिर लागेको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो दस्तावेजमा हामी क्रान्तिकारी हौं भनेर त छ तर व्यवहारमा अरु पार्टी र हामीबीच पहिचान नै मेटिने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा माओवादी पार्टी अझै खराब छनकी भनेर जनतालाई परेको छ ।
यो प्रक्रियालाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्नमात्रै खोजेको हो । तर, यसबीचमा हामीमा देखिएको कार्यशैली र आचरण हाम्रो उद्धेश्यसँग मिलेको छैन । उनले भने, ‘यही विन्दुबाट हामी सुध्रिनु पर्छ ।’
उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा पार्टीको भूमिका असाध्यै कमजोर भएको पनि बताए । पार्टीको राजनीतिक वैचारिक उदेश्य के हो ? हाम्रो पार्टीको पहिचान के हो भनेर जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन अभिमुखिकरण आयोजना गरेको बताए । कार्यक्रममा उनले पार्टीमा क्रमशः पहिचानको संकट समेत आएको समेत बताए । उनले भने, ‘हाम्रो दस्तावेजमा हामी क्रान्तिकारी हौं भनेर त छ तर व्यवहारमा अरु पार्टी र हामीबीच पहिचान नै मेटिने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा माओवादी पार्टी अझै खराब छनकी भनेर जनतालाई परेको छ ।’
ओलीले चुट्कीमै भाँड्लान् गठबन्धन ?
प्रचण्डले माओवादीप्रति जनताको मोह भंग नभइसकेको बताए । तर सच्चिओस् भन्ने सन्देशका साथ तेस्रो शक्ति बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी हातमा राखिदिएको टिप्पणी गरे । तेस्रो शक्तिका रुपमा माओवादीले कहिले एमालेको त कहिले कांग्रेसको दम्भ बढाइदिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा बाध्यता पनि छ, आवश्यकता पनि छ, कमीहरु पनि होलान् ।’
काठमाडौं,धरान र धनगढीमा राजनीतिक दलहरुलाई पछाडी पारेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जितेको बिषयलाई पनि प्रचण्डले उठाए । उनले स्विकार गरे । आज उनी भन्दै थिए,‘स्वतन्त्रहरुको यो जीतलाई हामीले ‘सबक’ का रुपमा लिनु पर्छ ।’
प्रायश्चितसँगै दम्भ पनि
‘प्रचण्ड’ले देशका १२२ स्थानीय तहमा पार्टीले प्राप्त गरेको जितले माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार माओवादी पार्टी निर्वाचनबाट प्रभावशाली बनेको छ ।
‘हामी १२२ (स्थानीय तह)मा छौं । १२२ त्यस्तो १२२ हो, जो राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने, देशलाई कता मोड्ने हो त्यतै मोड्नसक्ने तागतसहितको तेस्रो छौं हामी’, प्रचण्डले भने ।
एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादीलाई ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले पनि एमालेलाई जस्तो ठेगान लगाउन दिन नआओस् ,अहंकार र दम्भ आयो भने फेरि विद्रोह गर्ने हो, एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने दिन नआओस् ।
प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा पाएको सफलतासँगै नेपाली कांग्रेस अहंकारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफूहरु कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको, तर २०७४ को चुनावपछि एमालेले झै दम्भ, कांग्रेसले देखाए विद्रोह गर्नुको विकल्प नहुने उनले बताए ।
राम्रो उद्देश्य राखेर एमालेसँग चुनावी तालमेलका साथै पार्टी एकता गरेको भए पनि अवसरवादीहरुले त्यसलाई दुरुपयोग गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले कांग्रेसको त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले मिहिनेत गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो, भइराख्नुस् भन्ने पनि छ ।
तर, एमाले जस्तै अहंकार र दम्भ चुलिएर माओवादीलाई ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले पनि एमालेलाई जस्तो ठेगान लगाउन दिन नआओस् ,अहंकार र दम्भ आयो भने फेरि विद्रोह गर्ने हो, एमालेलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने दिन नआओस् ।
चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग संसदमै अलपत्र